के हो डिजिटल मार्केटिङ ? किन गर्ने डिजिटल मार्केटिङ ? के हो डिजिटल मार्केटिङको तरिका ?
- नेपाली सन्देश मङ्लबार, बैशाख २५, २०७५ , 14.2K जनाले हेर्नुभयो
उनीहरू अनलाइन बस्ने समय पनि निकै बढेको छ । यो सँगसँगै मानिसहरूको जीवनशैली पनिपरिवर्तन भएको छ । अहिलेका मानिसहरू घरमै बसीबसी मोबाइल चलाएको भरमा किनमेल गर्नचाहन्छन् । आफू बसेकै ठाउँबाट होटलको मेनु हेर्दै त्यही अर्डर मगाउन सक्ने अहिले हाम्रो देशमापनि सम्भव भैसकेको छ ।
के हो डिजिटल मार्केटिङ ?
अनलाइन मार्केटिङको अर्को स्वरूप हो डिजिटल मार्केटिङ, जसअन्तर्गत गुगल सर्च, सामाजिकसञ्जाल, इमेल र व्यापारिक वेबसाइट आदि प्रयोग गरेर आफ्ना ग्राहकसँग व्यापारिक रूपमा जोडिनेविधिहरू पर्छन् । आफ्ना ग्राहकहरूलाई सजिलो हुने गरी जहिले पनि जोडिने वस्तु हो मार्केटिङ रसमयअनुसार आफूलाई परिमार्जित गर्दै मानिसहरूको परिवर्तित जीवनशैलीसँगै फस्टाइएको छ ।डिजिटल मार्केटिङ ब्लग पोस्ट, इन्फोग्राफिक्स, सामाजिक सञ्जालजस्तै फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम,इमेल आदिका विभिन्न वस्तुहरू प्रयोग गरेर आफ्ना ग्राहकहरूसम्म पुग्ने गरिन्छ र आफ्नो लक्ष्यभेटाइन्छ ।
डिजिटल मार्केटिङका लागि विभिन्न विधि अपनाउन सकिन्छ । यसअन्तर्गत सर्च इन्जिनअप्टिमाइजेसन (एसइओ), कन्टेन्ट मार्केटिङ, सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) मार्केटिङ रअप्टिमाइजेसन, इमेल मार्केटिङ, सर्च इन्जिन मार्केटिङ आदि पर्छन् । यसका अतिरिक्त डिजिटलमार्केटिङ इन्टरनेटको प्रयोग नहुने तर डिजिटल विधिबाट हुने एसएमएस र एमएमएससम्म पनिफैलिएको छ ।
किन गर्ने डिजिटल मार्केटिङ ?
परम्परागत मार्केटिङको तौरतरिकाभन्दा सस्तो पर्छ । डिजिटल मार्केटिङ, इमेल मार्केटिङ,सामाजिक सञ्जालका मार्केटिङहरू गर्न पर्ने लागत तपाईंले टेलिभिजन, रेडियो र पत्रपत्रिकामा गर्नेविज्ञापनको तुलनामा नगन्य हुन्छ तर तपाईंले गरेको डिजिटल मार्केटिङको पहुँच भने तुलनात्मकरूपमा बढी नै आउने सम्भावना हुन्छ । यसका अतिरिक्त तपाईंले गर्ने डिजिटल मार्केटिङको प्रत्यक्षअनुगमन तपाईं आफैंले आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा गर्न सक्नुहुन्छ र चित्त नबुझेको खण्डमा त्यहीसमयमा त्यो मार्केटिङ रोकेर नयाँ रणनीति अपनाउन सक्नुहुन्छ ।
आजको युग प्रविधिको युग हो र बिस्तारै परम्परादेखि चलिआएका सञ्चार आदि विभिन्नउपकरणहरूको प्रयोग घट्दो छ । आफ्नो व्यापार–व्यवसायलाई डिजिटल मार्केटिङमार्फत अझचुस्तदुरुस्त राख्न सक्नुहुनेछ
के हो डिजिटल मार्केटिङको तरिका ?
तपाईंका साथमा वेबसाइट छ भने सर्वप्रथम तपाईंले आफ्नो वेबसाइटलाई गुगललगायत अन्य सर्चइन्जिनमैत्री बनाउन आवश्यक छ । यसले गर्दा तपाईंका ग्राहक र अन्यले पनि कुनै उत्पादन गुगलआदि सर्च इन्जिनमा खोज्दा तपाईंलाई नै भेट्ने सम्भावना बढ्छ । सामाजिक सञ्जालमा बलियोउपस्थिति बनाएर तपाईंले आफ्नो उत्पादनको प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालनचलाउने व्यक्ति तपाईं आफैंले पनि बिरलै भेट्नुहुन्छ ।
आफ्नो वेबसाइटमा आउने व्यक्तिलाई आफ्नो ग्राहक बनाउनुहोस् । अनावश्यक तरिकालेडिजिटल मार्केटिङमा खर्च नगर्नुहोस्, थोरै लगानीमा धेरै लाभ लिनुहोस् । यसका लागि तपाईंविज्ञको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ र अन्त्यमा आफूले गरेको डिजिटल मार्केटिङलाई नियमित रूपमाअनुगमन गर्दै सुधार गर्नुहोस् ।